HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa မြန်ရထားရပ်တန့်ဖို့ site ကို, အဝေးမှမျှော်ပေါ်နေဖို့လာ
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, အစာရှောင်ခြင်းရထား, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာ Bursa ဝေးလံခေါင်သီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြီးဆုံးရန်အစာရှောင်ရထားလာကြလိမ့်မည်
ပိုပြီးရက်ပေါင်းဖြစ်လာခဲ့သည် ... 15 14 အဝေးပြေး Bursa တဲ့ကာလ task ကိုရောက်လေ၏။ ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်, ဖုန်းပေါ်မှာ chatting နေချိန်မှာယခု TCDD Özgür'lအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများအတွက်လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတာဝန်ယူစတင်အကြံပြုချက်များ, ငါတို့မေးမွနျး:
"ဘယ်လိုကြောင့် demiryolc karayolc အဖြစ်နှစ်ပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ခံရဖို့ခံစားရသလဲ"
karayolc အခမဲ့ဘဝအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်တဦးတည်းသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယနေ့အထိကစီမံကိန်းအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့လမ်းများအတွက်လမ်းလုပ်ဖို့လျာထားသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
လာမယ့်အသက်တာ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများများအတွက်တာဝန်ရှိရထားလမ်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မှ Executive Vice President အဖြစ် TCDD အဖြစ်, ရထားလမ်းဦးစားပေးဖြစ်လိမ့်မည်။
15 ထိုနေ့၏သူ၏ပထမဆုံးစှဲ shared:
"အဝေးပြေးအနေနဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုပိုမိုမြေယာစစ်ကြောစီရင်တော်မူ။ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှာတောင်မှလူအပေါင်းတို့သည်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နှင့်အလေ့အထဖြေရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ "
"ဟုအဆိုပါမီးရထားလုပ်ငန်းကိုတစ်နှစ်လုပ်ခဲ့တယ်ကတည်းက။ ပလက်ဖောင်းပေါ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးအလွန်ကောင်းစွာသိတယ်။ သို့သော် TCDD Entrepreneurship အသစ်တစ်ခု concept ကို။ "
"ကျနော်တို့ကထိုကဲ့သို့သောမြေယာအဖြစ်အခြေခံအဆောက်အအုံပြဿနာတွေနဲ့ကိစ္စများကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ TCDD မှအစေခံပါလိမ့်မယ်လွှမ်းမိုးဖြေရှင်းရေး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကဒီမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများမှကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာနှင့်အတွေ့အကြုံကိုအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ "
"ငါသည်လည်း Bursa လက်လွတ်" ဟု၎င်းကဆိုသည်နှင့်ဆက်ပြောသည်:
"အခုဆိုရင်ပိုကောင်းအလည်အပတ်ခရီးပြင်းထန်သောအဆိုပါဖော်ရွေအနည်းငယ်သာအတွက်ဆက်လက်ရ။ အဖြစ်မကြာမီဒီပြင်းထန်မှုအဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ယခုလအတွင်း Bursa ထံသို့လာကြ၏။ "
"ဘာကြောင့်ကျနော်ကောင်းကောင်းသိကြအစာရှောင်ရထား Bursa ရွှေ့ဖို့ကိုဆိုလိုသည်။ ငါသူ့ကိုဆောင်ရွက်သောဝဘ်ဆိုက်အလုပ်အတွက် Bursa မှရောက်ကြောင်းကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံကိုအဘယျသို့အလုပ်အကိုင်အကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာရေးစင်မြင့်ကိုဆွဲလိမ့်မည်ဟုပြသထားတယ်။ "
အထူး Method ကို:
"အဝေးပြေးကိစ္စများဆောက်လုပ်ရေး gasping မြင်အညီဖြေရှင်းနည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသည်, ထို site မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ငါမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး Karayolc စိတ်ဓာတ်ထဲမှာမှိုနှင့်အတူ Bursa မှရောက်လာသောအခါငါက၎င်း၏အရပ်ဌာန၌အရာရာတွင်ကြည့်ပါ။ "
ကာလ၏ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်, Bulent Arinc, ခေတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Balani နှင့်အတူ 23 ဒီဇင်ဘာလ 2012 ရက်ပေါင်း Binali Yildirim နှင့် Balat ဝင်ပေါက်အခမ်းအနားသံမဏိအတွက်အလုပ်သမားနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Faruk မြန်နှုန်းရထားအခြေခံအုတ်မြစ်၏ကာလ Mudanya လမ်းမကြီးအလောင်းတော်ထားခဲ့ပါတယ် Join ထားတဲ့။
အခမ်းအနား 14 အတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး။ Ozgur အားစိုက်ရသောဒေသဆိုင်ရာမန်နေဂျာအဖြစ်လည်းရှိခဲ့သည်။
Ozgur အားစိုက်ရသောလမ်းကြောင်းများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဆောက်လုပ်ရေးပြဿနာများသိတယ်, အခု TCDD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်သူတို့ကိုကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
အစာရှောင်ခြင်းရထားနု cancel 1.5 နှစ်ပေါင်း Yenisehir-Osman စတင်ရန်
အစအဦးကတည်းကက ... ကျင်းပနုအတွက်ဧပြီလ32018 ရက်ပေါင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စဉ်ကိုရ၏ Akdeniz-Osman လိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ, superstructure နှင့်လြှပျစစျအကျင့်ကိုကျင့်၏ Bursa-Yenisehir လိုင်းများ၏ superstructure နှင့်လြှပျစစျအကျင့်ကိုကျင့်နူးညံ့ခဲ့ကြသည်။
Bursa-Yenisehir Bursa-Osman လိုင်းဘေးတွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးအားလုံးနူးညံ့ခဲ့ကြသည်။ အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကို2520 သန်းဘီလီယံခန့် liras ကွန်ယက်ပါဝါကိုပေး၏, ဒါပေမယ့်နုဇွန်လတွင် Bayburt ဆောက်လုပ်ရေးအနိုင်ရတူညီတဲ့စျေးနှုန်းကြေငြာခဲ့သည်။
ဒေါ်လာစျေးကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးစတင်မမူဘယ်မှာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ရန်ပျက်ကွက်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းထ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့,2520 ဘီလီယံကိုပေါင်သန်းပေါင်နုပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်4ဘီလီယံကိုကျော်လွန်သွား။
နူးညံ့သောလူနေမှုထိုသို့သောဖြစ်စဉ်ကို "ထုတ်လုပ်မှုသွင်းအားစုများ၏စျေးနှုန်းများအတွက်မျှော်လင့်မထားတဲ့တိုး" ခိုင်ခိုင်လုံလုံ 14 စက်တင်ဘာလ 2019 သတင်းအချက်အလက်များရောက်ရှိရက်စွဲ၏အဖြစ်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။
အခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေးအကြား Bursa-Yenisehir ကဒီမျဉ်း၏မြေတပြင်လုံးအတှကျအသစ်ကိုတင်ဒါပိတ်ပြီးမည်, ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ (အဖြစ်အပျက် - Ahmet ထင်ပေါ်ကျော်ကြား Yilmaz)
အဝေးမှကွညျ့ရှုမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား၏ပဒေသာ 22 / 10 / 2013 အဝေးမှကွညျ့ရှုမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထား၏ပဒေသာ: အချထား၏အလယ်တန်းနှင့်၎င်း၏ပြည်နယ်အတွင်းနီးပါးအတိအကျဖြစ်သောတူရကီနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်, Bolu, အတောအတွင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုဆွဲဆောင်သောတိုက်ခိုက်မှုများကိုsıkışmışlığını။ ရဲ့ကျနော်တို့မိန့်ခွန်း assign ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့, သဘောသဘာဝ Bolu အလှတရားကျနော်တို့ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏မတူကွဲပြားမှုနှင့်အပူဖြစ်ရပ်အကြောင်းပြောဆိုပင် Bolu ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦ၏အခြားပြည်နယ်များအဘယ်သူအားမျှလျှင်ကူးမရနိုင်ပါ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အနှစ်, ငါသည်ရေးပါ။ သူတို့ရှေ့မှာလဲကျရန်လိုအပ်ကြောင်း၏အများပြည်သူအမြင် Melancholie နှင့်ကောင်းစွာ-Bolu'l မန်နေဂျာ၏ပဒေသာငါ Bolu များ၏အကျိုးအတွက်မည်သည့်အောင်မြင်မှုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်မကြားခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာမကြာသေးခင်ကတူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်အမြင့်မြန်နှုန်းရထား Path ကို system ကို Bolu များ၏ပုန်ကန်ဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တို့အကြားအထူးသဖြင့်ဤပြဿနာအတွက်ချင်တယ်ကျင်းပမည့်မျှော်လင့်ချက်တစ်အလင်းနှင့်အတူ ...
အဆိုပါ IMM ကနေအဆုံးပိတ်ဆို့မှုကိုလေ့လာမှုမှဇူလိုင်ကားလမ်း 17 / 07 / 2018 အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် TEM အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဟာ Metris လမ်းဆုံများတွင်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကိုအပြီးသတ်ဖို့အလုပ်၏အဆုံးသဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ လမ်းတံတား Piers တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သုံးလအကြာပြီးစီးခဲ့ပြီးစတင်ခဲ့သည်။ ပြီးစီးသည့်အခါတံတားများနှင့်ဆက်သွယ်မှု၏ဆောက်လုပ်ရေး Sultangazi Eyup ခရိုင်အပေါ်တစ်ဦးအသွားအလာယိုမထိခိုက်စေဘဲထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ လုပ်ဖို့အလုပ်လမ်းခင်း၏ပြီးစီးပေါင်းကူးဖို့ girders အားမရ။ Eyup ခရိုင်မှ input ကိုပေးသွားမှာပါနှင့်ခရိုင်လမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏ Edirne ခြမ်း 4,5 ကီလိုမီတာ Sultangazi ဦးတည်ချက်သို့လင့်ထားသည်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပြီးစီးခဲ့ပြီးပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ အဝေးပြေး 120 15 မီတာပေါ်တွင် TEM ၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှည်လျားသောမီတာကျယ်ပြန့်သည် loop လုပ်ဖို့ယာဉ်ပြန်သွားပါ။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် precast တံတားထုပ်၏ installation လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ...
TCDD န်ထမ်းတူရကီပတ်ရစ်ခြောက်လလက်နက်ကနေလာ 04 / 04 / 2013 တူရကီအတွက်လွှမ်း TCDD န်ထမ်းယူနိုက်တက်ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားများ '' ပြည်ထောင်စုခြောက်လလက်နက် (BTS) နှင့်တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျယ်ပြန့်များ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူသရဖူဆောင်းတူရကီ၎င်းတို့၏ချီတက်ပွဲ၏ညီလာခံ၏အရှေ့ဘက်ကနေတူရကီရဲ့ခြောက်လစင်တာများအဖွဲ့ဝင်များမှဖုန်းခေါ်အားဖြင့်သာတည်သငျသညျ (TUS) ပလက်ဖောင်းန်ထမ်းမီးရထားမှလာကြ၏။ မူကြမ်းရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး, မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးများ၏လွတ်လပ်အပေါ်ဥပဒေ, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကော်မရှင်များ၏ကျမ်းပိုဒ်ဆန္ဒပြခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းလုပ်သားများရထားလမ်း၏အကျင့်, "ကျနော်တို့ 16 ဧပြီလတိုင်းပြည်အနှံ့သပိတ်ဥပဒေကြမ်းအပေါ်များမှာဆုတ်ခွာမပါဘူး" ဟု၎င်းကပြောသည်။ ပြည်နယ်မီးရထားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများတူရကီအတွက်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုများ၏ရှေ့မှောက်၌စုဝေးစေ, "မီးရထား, လူများပိုင် ရောငျးခခြဲ့မညျမဟုတျ! "" ဟုအဆိုပါ AKP ဥပဒေ, ပြဇာတ်နှုန်းလက်ခံရရှိ! "ငါကြွေးကြော်သံများရွတ်ဝင်ပေါက် Dikmen ပါလီမန်အထိသွားလာ၏။ Platfom အဖွဲ့ဝင်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက် ...
အစ္စတန်ဘူလ်မှ Metro ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြီးဆုံးရန် 20 / 05 / 2013 ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစ္စတန်ဘူလ်က Metro မှာကိုလက်စသတ်လိမ့်မည်: မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်အပြည့်အဝမြန်နှုန်းမှာဆက်လက်ကမ္ဘာ့လူဦးရေအများဆုံးမြို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများအဖြေတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပြည်နယ်ပြုလုပ်ခြင်း5မက်ထရိုလိုင်းစီစဉ်ထားခြင်းနှင့် 2006 Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköyမြေအောက်ရထား, အdevredildi.ulaştırသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ယခုဝန်ကြီးဌာနကတည်းကပြီးစီးခဲ့မရနိုငျသညျ, အစ္စတန်ဘူလ်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လေလံဇာတ်စင်အတွက်မြေအောက်ရထားလိုင်းများပေါ်ခေါ်သွားတယ်။ ထို့ကြောင့်ပြည်နယ်များဟာမက်ထရိုလိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးစီစဉ်ထားခြင်းနှင့်52006 နှစ်ပေါင်း Otogar-Bağcılar-Başakşehir-Olimpiyatköyဝန်ကြီးဌာနကမြေအောက်ရထားစေမည်ကတည်းကပြီးစီးခဲ့မရနိုင်ပါ။ နေဆဲအပြည့်အဝလွှဲရှိနေစဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများအဖြေတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်လုပ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေးသည်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏မီဂါမြို့အဖြစ်ပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်မြေအောက်ရထားလိုင်းများဆောက်လုပ်မှုများလုပ်ဆောင် ...
မီးရထား signal နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည်နယ်၏လက်၌ဆက်နေရန် 11 / 03 / 2013 မီးရထား signal များနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည်နယ်, ကိုယ်လက်ပို့ဆောင်ရေးနေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Binali Yildirim, အစ္စတန်ဘူလ်တရားမျှတသောစင်တာ, '' ဥရောပအာရှရထား-3 ။ အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသော၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၎င်းတို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ရထားလမ်းနှင့်အလင်းရထားလမ်းစနစ်အခြေခံအဆောက်အအုံဂျာနယ်လစ်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ဖွင့်ပွဲနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်း, 'ယခု' 'နိုင်ငံတော်မီးရထားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၏အသုံးပြုမှုကိုမှဖွင့်လှစ်အပေါ်လျှပ်စစ်ပြက်။ ယခုတိုင်အောင်သူ့မီးရထားအားဖြင့်ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအဘို့အရထားလမ်းကို အသုံးပြု. ခဲ့သည်။ အခုတော့လူတိုင်းလေဆိပ်နှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံအဆောက်အဦကိုသုံးနိုင်သည်။ မီးရထားလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဦးမည် '' ဟု၎င်းကပြောသည်။ ပြည်နယ်မီးရထားအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် ...
အစ္စတန်ဘူလ်မှ Metro ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြီးဆုံးရန်
မီးရထား signal နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည်နယ်၏လက်၌ဆက်နေရန်
Haydarpasa ဘူတာရုံ BTS ကိုယ်ရံတော် 15 အပေါ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှပါးတထောင်လက်မှတ်ပေါင်းဆက်ရှိနေဦးမည်
နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသည့် TT Arena roundtrip, မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုပြီးအောင်ပြုခံရဖို့တစ်ဦးအပိုဆောင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းတွေ့ကြုံ။
လေလံဆုရရှိသူİÇTAŞ Astaldi3။ တံတားတစ်နှစ်ပြီးဆုံးပါလိမ့်မည် 3